In kabsaday files ka taleefannada gacanta LG:
Mararka qaar waxaad soo kaban karto, files in aad tirtirto ama qaab oo istareexa ku saabsan teleefoonada gacanta LG, halka mararka qaar ma ahan. Waa maxay xukunka? Dhab ahaantii ma jiro mid ka mid ah. Waxay ku xidhan tahay oo kaliya halka aad ku tirtirto ama qaabka files iyo waxa aad samaysay ka dib shilka.
Haddii aad la tirtiro ama formatted files ka SD kaarka / CF aad telefoon LG cell, hambalyo! Waxaa jira fursad wanaagsan oo aad iyaga u soo ceshano karo. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa aalad kabashada xogta. Dabcan, ma tahay in aad u malaynayeen inay wax ka bedel kasta oo macluumaadka si aad LG telefoonka gacanta ama kaarka ka dib musiibada ka dib. Overwritten ka dhigi lahaa aad files hore aad u adag tahay in la soo kabsaday.
Ka hor aad bilaabi kartaa, heli LG telefoonka gacanta kabashada file aalad: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac (la heli karo Mavericks). Labada of software-ka waa aamin iyo xirfadeed. Waxaad u isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado photos, video iyo files audio ka taleefannada gacanta LG, iyadoo aan loo eegayn in aad tirtirto, qaab ama iyaga lumay ay sabab u tahay sababo kale. Iyo aan weydiiyo in aad noqon xirfad farsamo. Waxaad ku dhameysan kartaa xalka kabashada buuxa ee 3 tallaabo.
Download version maxkamad free of this LG telefoonka gacanta software kabashada xogta hadda. Dooro version saxda ah ee computer.
Fiiro gaar ah: Haddii aad u tirtiray files on xasuusta gudaha telefoonka ee, waan ka xumahay in aan idhaahdo, waxaa macquul ma in aad ka bogsato iyaga, maxaa yeelay xasuusta telefoonka gudaha ma aha kaarka guud. Ilaa hadda, ma jiro software kabashada in tani ay samayn karto.
Sidee inuu ka soo kabsado files ka taleefannada gacanta LG, oo ay ku jiraan sawir, video iyo maqal ah
Tallaabada 1 Connect aad telefoonka gacanta LG in kombiyuutarka
First of dhan, xiriiriyaan phone in kombiyuutarka la cable ah digital, ama aad qaadi karto ka mid ah kaadhka xusuusta oo ku xirmaan akhristaha kaarka. Markaas aan bilowno barnaamij oo guji si "bilow" kabashada macluumaadka telefoonka LG cell.
Tallaabada 2 Scan files lumay ee aad telefoonka gacanta LG
Dooro telefoonka ama kaadhka xusuusta, oo guji "Scan" si aad u hesho files lumay.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan files ee taleefannada gacanta LG
Waxaad ku eegaan kartaa mid ka mid photos recoverable by mid si aad u hubiso tayada sawirka kadib. Audio iyo video files ma noqon karo Falanqeynta ka hor soo kabashada. Waxaad ka eegi kartaa dhammaan faylasha aad rabto oo wuxuu oofin kabashada la mid click on badhanka "Ladnaansho".
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad taleefannada gacanta LG ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial ee telefoonka gacanta kabashada LG
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka LG Cell Phone fudayd